Sierra Leone: Karantiilka madaxweyne ku xigeenka - BBC News Somali
Sierra Leone: Karantiilka madaxweyne ku xigeenka
1 Maarso 2015
Image caption Sierra Leone ayaa ka mid ah dalalka Ebola ay aad u saamaysay.
Samuel Sam-Sumana, ayaa sheegay in uusan dadka la xidhiidhi doonin mudo kow iyo labaatansano ah. Dhanka kalana dawladda ayaa dib u soo celiyay xayiraadihii waddanka ka jiri jiray qarkood kiisaska la xaqiijiyay ee Ebolaha awgood.
Dawladda ayaa sheegtay in ay aad ugaga walaacsan yihiin kiisaska cusub ee sii kordhaya, kuwaas oo badankooda lala xidhidhiyay dadka dhinaca badda ka soo galaya. Sidaas daraadeedna waxa ay sare u qaadeen baadhitaanka lagu samaynayo doomaha iyo maraakiibta, waxa ayna mamnuuceen in maraakiibta ay habeenkii baxaan.
Waxaa sidoo kale la xadiday dadka loo ogolyahay in ay Tagaasi adeegsan karaan. Waxaana sidoo kale la soo bandhigay baadhitaan taxadar leh oo caafimaad oo wadanka oo dhan laga fulinayo.
Dhamaadkii sanadkii hore waxaa jiray rajo laga qabay in la soo afjari doono kiisaska cusub ee dalka Sierra leone, laakiin arrintaasi waa ay isbadashay. Hay'adda caafimaadka adduunkuna waxa ay sheegaysaa in aysan wali ogayn sababta ay arrintaasi ku dhacday.